Myanmar Gays Heaven: biguyasian@gmail.com
Posted by Myanmar Gays Heaven at 8:11 AM
ဘာဖြစ်​မှာလဲ ဆက်​​ပြောဦး​လေ။ရှင့်​ဟာကလဲ ....
အဆောင့်ခံချင်ရင် 250672886 ကိုဆက်သွယ်ပါ ခရေချစ်သူပါ
ဖုန်းနံပါတ်​က အတုကြီး။ကျွန်​မဆက်​ပြီး​မေးလိုက်​တာ​ပေါ့ လိုးချင်​​နေတာ ရှင်​ဆိုတာလား​ဆို​တော့ မ​ပြော​တော့ပါဘူး။ရှက်​လိုက်​တာ ကျွန်​မ မျက်​နာဘယ်​သွားထားရမလဲ။​ကောင်းပြည့်​​ပေါင်​နှစ်​လုံးကြားသာ ထားလိုက်​​တော့မယ်​။ ပုံ ခင်​ခံချင်​
ဖင်​မလိုးဘူးလို့လိုးကြည့်​ချင်​သူ May 5, 2014 at 3:27 PM
မိန်းမ​ချော​ချောတဲ့Gay ရဲ့ လီးစုပ်​​ပေးတာခံချင်​တယ်​ အလိုးခံချင်​လည်းလိုး​ပေးမယ်​ merliondua@gmail.com ကိုအက်​ပါမလိုးဘူးလို့လိုးကြည့်​ချင်​သည်​ ဓာတ်​ပုံပါ​မေးပို့လို့အဆင်​​ပြေရင်​ပို့ပါ ကြိုက်​လျှင်​ဖုန်းနံပါတ်​ပို့​ပေးမည်​
09420266286 aung lay call me
chanchan chan August 21, 2014 at 12:37 PM
Anonymous May 12, 2014 at 3:59 AM
လီးစုပ် ဖင်ခံချင်သူများ 0943113627 ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဒီပုံပိုင် ရှင် ရဲ့ မေလ်း လေး ရေးပေးပါ
aung lay pr
09420266286 call me
Anonymous May 27, 2014 at 2:59 AM
ရဲ​လေးလို့​ခေါ်ပါတယ်​။homoတ​ယောက်​နဲ့အတည်​တွဲချင်​ပါတယ်​ရုပ်​ရည်​အသင့်​တင့်​ရှိပြီးမဝရပါဘူးမန်း​လေးစစ်ကိုင်းနဲ့အနီးတဝိုက်​ဆိုပိုအဆင်​​ပြေပါတယ်​စိတ်​ဝင်​စားရင်​ဆက်​သွယ်​ပါ yelay828@gmail.com ကို
johnmoon80 June 3, 2014 at 5:37 PM
Photo ပိုင်​ရှင်​ရဲ့ လီးကို စုပ်​ချင်​တယ်​ ဖင်​လည်းလိုးခံချင်​တယ်​cakecreamx@gmail.comကိုအမြန်​ဆက်​သွယ်​ပါ စိတ်​တိုင်​ကျ စုပ်​​ပေးပါမယ်​
ပါးစပ်​ထဲမှာပြီး​အောင်​ စုပ်​​ပေးချင်​တယ်​ cakecreamx@gma.com ကိုဆက်​သွယ်​ပါ
Photo ပိုင်​ရှင်​ရဲ့လီးကို စုပ်​ချင်​ Addပါ..
မုံရွာမှာနေတယ်၊ မုံရွာမှာရှိတဲ့ Gay များနှင့် အဆက်အသွယ်ရချင်တယ်။ မုံရွာမှာနေကြသည့် ဖုန်းနံပါတ်များ ပေးကြပါ။
chanchan chan August 21, 2014 at 12:43 PM
စုတ်ပေးချင်တဲ့သူ ဆက်သွယ် မနွဲ့ ရ 09421127534 ygn ကနော်
စုပ်​​ပေးမယ်​ gmail က​နေ ပုံပ်ု့​ပေးပါ လုံးဝမနွဲ့ပါ cakecreamx@gmail.com ကို ဆက်​သွယ်​ပါ
အရမ်းလိုးခံချင်ပါတယ် ဖင်ယားနေလို့ပါ လရည်သောက်ပါတယ်
Anonymous August 17, 2014 at 12:02 PM
ပုံပိုင်​ရှင်​ လီးကြီးကို စုပ်​​ချင်​တယ်​
စုတ်ပေးချင်ရင် greatsky2014@gmail.com ကိုဆက်​သွယ်​ပါ
စုပ်​​ပေးမယ်​ ၂၅၇၃၄6587 viber က suck လို့​ရေးပြီးစာပို့ပါ
Anonymous August 18, 2014 at 11:22 AM
Anonymous August 24, 2014 at 12:42 AM
greatsky2014@gmail.com (or) biguyasian@gmail.com ကိုဆက်​သွယ်​ပါ
m2boylay@gmail.com September 9, 2014 at 8:54 AM
ကျွှန်တော်အမည် ကိုထက် ပါ ကျွှန်တော် ကသာကကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဖုန်းထဲကနေချစ်သူလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ကျွှန်တော်အရမ်းသူကိုချစ်ပါတယ် သူကတော့ ကျွှန်တော်ကို ခုချိန်ထိချစ်တယ်လိုတော့မပြောဘူးပါဘူး လူချင်းတွေမှ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ပြောမယ်လိုပြောခဲ့ပါတယ်ကျွှန်တော်သူကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့ ချစ်တာပါ ဘ၀မှာ သေထိချစ်သွားမယ်လိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ အချစ်ရူးလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် သူနိုင်ငံခြားထွက်ရင် ကျွှန်တော်ပါလိုက်သွားပြီး အလုပ်အတူလုပ်မယ် ပြန်လာရင် အတူရန်ကုန်မှာနေမယ် မိန်းမမယူဘဲသူနဲ့သေထိနေသွားမယ် သူမန်ူလေးလာရင် ပြင်ဦးလွင်ကိုအတူဆိုင်ကယ်စီးပြီးလျှောက်လည်မယ် ဘုရားဖူးအတူသွားမယ် ချောင်းသာမှာ အချစ်ခရီးစဉ်ဖြစ်အတူသွားမယ် ပျော်ရွှင်စရာနေရက်လေးတွေပေါ့ ဒါဘေမဲ့ ၂၆.၈.၂၀၁၄ရက်ကနေ၂.၉.၂၀၁၄ရက်နေထိကျွှန်တော်ဖုန်းပိတ်ခဲ့ပါတယ် ဒါကလည်း ကျွှန်တော်ပုဒ်မ၄၇နဲ့ ထောင်၇ရက်ကျနေလိုပါ ဒါကို သူက ကျွှန်တော်ကိုအထင်လွဲပြီး အရင်လိုမဟုက်တော့ဘဲ ဖုန်ူဆက်ချိန်နည်းလာပါတယ် ကျွှန်တော်သူကိုဖြစ်ကြောင်းအကုန်ပြောပြခဲ့ပါတယ် သူနဲ့ ၁၀ လပိုင်းတွေဘို့ချိန်းထားပါတယ် ခု၉လပိုင်းထဲရောက်လာပါပြီ ကျွှန်တော်ပျော်ရွင်စွာစောင့်မျော်နေပါတယ် လူလောကမှာ တကယ်ချစ်မိရင် လူတိုင်းက အရူးတစ်ယောက်လိုပါဘဲ အချစ်စစ်မှာ ချစ်သူပေါ့ ရိုးသားရမယ် သစ္စာရှိရမယ် နားလည်မူတွေနဲ့လေ တည်ဆောက်မှသာ အချစ်စစ်ရဲလမ်းလေးကဖြောင့်ဖြူးသာယာမယ်လေ အနေတွေ့ဝေးနေလည်း သစ္စာရှိပြီး ချစ်နေမှာမောင်တစ်ယောက်ပါ ခုလာမယ့် ၁၂.ရက် ၉လပိုင်း ၂၀၁၄ရက်နေမှာ ကျွှန်တော်ချစ်သူ မွေးနေပါ ချစ်သူ မွေးနေမှစ နောင်နစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်သောဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ့်တစ်ကယ်ချစ်သောသူနဲ့သာယာသောနေရက်လေးတွေဖြစ်ပါစေ သဲကို မြက်နိုးစွာချစ်နေတဲ့မောင်
Anonymous September 20, 2014 at 2:07 AM
အကိုက ကသာက.. အကိုပြောပေးမယ်.. သူက ဘယ်သူလဲ????
မိုးနတ်မယ် ၀၉ ၄၃၁၈၀၉၄၉
Prince Shine October 16, 2014 at 2:10 AM
Anonymous October 23, 2014 at 7:48 AM
Peter König October 26, 2014 at 8:51 PM
Yes Penis mmm...email: p.Koenig116@gmail.com
Anonymous November 3, 2014 at 8:55 AM
koaungmyo myint March 12, 2017 at 1:42 AM
Zay Aung December 11, 2014 at 11:08 PM
Zay Aung December 11, 2014 at 11:10 PM
ဖင် ခံချင် တယ်
အဲဒီလီးကြီးနဲ့ခံချင် တာ လာလိုးပေးပါလား
royallover22 December 28, 2014 at 7:04 AM
Iron Dragon January 3, 2015 at 12:22 PM
Anonymous January 31, 2015 at 5:25 AM
Anonymous February 1, 2015 at 9:41 AM
crazy man March 10, 2015 at 10:43 AM
Looking for long lasting gay relationahip .from Ygn .. ages between 19 ~~30 .. educated gay man ... In interested ...contact to this number justacall or viber ..... .. 09420186635
nyiko March 21, 2015 at 6:43 PM
09798681091...ဖင်​မခံဘူး​သေးပါ....mdy ကပါ...ဖင်​ခံကြည့်​ချင်​ပါတယ်​...လုံးဝမနွဲ့ပါ..ရုပ်​လဲမ​ချောပါ..သန့်​ရှင်းတာကြိုက်​ပါတယ်​..phဆက်​ရင်​ blogsport ကလို့​ပြောပါ
လက်​နဲ့လိုးကြည့်​တာ...​ကောင်း​တော့​ကောင်းတယ်​....လီးနဲ့ ကြမ်းကြမ်း​လေး အလိုးခံကြည့်​ချင်​တယ်​...kyaw2kyaw42@gmail.com ဆက်​သွယ်​ပါလား...
fri တစ်ယောက် လောက် love အတွက် အတည်တွဲဝချင်ပါတယ်
09792000874 ကိုခေါ်ပါ top only
saiyin gyeit April 11, 2015 at 9:11 AM
ဘယ် က လဲ နော် မြစ် ကြီးနား က လိုးပေး မယ့် လူ မ ရှိ ဘူး လာ
saiyin gyeit April 13, 2015 at 10:17 AM
Anonymous April 29, 2015 at 1:23 AM
ဖင်ခံချင်နေတယ် mdy က လိုးပေးမယ့်သူရှိလား
Naing Tun June 27, 2015 at 5:50 PM
ngel lay November 20, 2015 at 9:57 AM
True Love April 29, 2015 at 1:25 AM
True Love April 29, 2015 at 1:26 AM
datha kyawaung July 29, 2015 at 6:12 AM
Anonymous August 8, 2015 at 10:44 PM
Anonymous October 10, 2015 at 4:56 AM
kk October 22, 2015 at 11:41 AM
ဒို့လဲအဲလိုလီးကြီးနဲ့လေးဘက်ကုန်ပြီးပက်ပက်စက်စက်အလိုးခံချင်လိုက်တာ ပါးစပ်ပါအလိုးခံချင်တာ လေးချီလောက်သာကုန်းလိုက်ရရင်အသက်ပါလောက်တယ်
ခံချင်တယ် လိုးပေးကြပါ ဘယ်နှစ်ယောက်လိုးလိုး ခံပါမယ်
ngel lay November 16, 2015 at 8:56 AM
ngel lay November 20, 2015 at 9:54 AM
koaungmyo myint March 12, 2017 at 1:51 AM
လိုး​ပေးမယ်​​လေ ဖုန်းနံပါတ်​ပို့​ပေး ​နေကုန်​လိုး​ပေးမယ်​
ngel lay November 20, 2015 at 9:56 AM
Kyaw Thu Soe December 22, 2015 at 5:22 AM
ngel lay January 20, 2016 at 9:14 AM
mdy ka par ngellay1357986koadd pay par
အ​ပေ်​ကလီးကိုကြိုက်​တယ်​ တုတ်​အရင်းထိ​အောင်​ ပါးစက်​နဲ့ငုံထားချင်​တယ်​ သုက်​​ရေ​တွေထွက်​တဲ့အထိ ခပ်​ကြမ်းကြမ်း စုပ်​​ပေးချင်​တယ်​ သူများလ​ရေမစားဘူး​သေးဘူး ကိုယ့်​ဟာကိုပြန်​ထုတ်​စား​နေရတာ ​နေ့တိုင်းဆို​တော့ ရိုးလာပီ (Note ကျားစစ်​စ်​ ​ရေမ​ရောဘူး လီးစုပ်​သုတ်​စားချင်​တာတခုပဲ)
ကို စည်​သူ Mail ပို့ထားတယ်​ စစ်​ကြည့်​ပါ ကျားစစ်​စ်​ပါ
Rot Chann December 14, 2015 at 4:46 AM
Pathein Thar December 25, 2015 at 11:12 AM
Wow. That isaone big dick.
ရဲစိုး April 11, 2016 at 11:01 PM
phin khan chin tal April 21, 2016 at 8:22 AM
Aung Paing Nyein August 16, 2016 at 6:27 AM
တူတူပဲစပ်းကြည့်မလား ၀၉၇၉၁၆၄၈၄၂၂ VIBER COME
Aung Paing Nyein August 16, 2016 at 6:22 AM
ဖင်ချရတာကြီု့က်တယ် ခံကြည့်ချင်တယ် 69 စွဲကြညါ့ချင်တယ် VIBER 09791648422